Qaybaha 4 Medicare oo sharaxan | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
La Soo Geliyay: Ogosto 20, 2020
Medicare waa barnaamijka caymiska caafimaadka ee dawladda dhexe. Wuxuu daboolaa dadka da'doodu tahay 65 ama ka weyn, iyo qaar ka mid ah dadka da'da yar ee qaba naafonimada ama xaaladaha kale ee gaarka ah. Waxaa laga yaabaa inaad wax ku saabsan maqashay 4 qaybaha Medicare, oo loo yaqaano Medicare Parts A, B, C iyo D. Balse ma ogtahay waxa ay ku kala duwan yihiin, ama waxa qayb kasta ay daboosho? Maqaalkan wuxuu shararxayaa adeegyada la daboolo ee qayb kasta oo Medicare ka mid ah. Taasi waxay waxtar yeelan kartaa haddii aad haysato Medicare iyo Medicaid labaduba waadna la yaabi doontaa waxa ku jira Medicare marka lala barbardhigo qorshahaaga Medicaid ee ka jira gobolkaaga.
1. Medicare Part A: Caymiska Isbitaalka Context link
Waa maxay Medicaid Part A oo muxuu daboolaa?
Medicare Part A wuxuu daboolaa adeegyada laga yaabo inaad hesho bukaan-jiif ahaan inta aad isbitaalka ku jirto ama xarunta kalkaalinta ee xirfadlaha joogo. Adeegyadaan waxaa bixiya xarunta daryeelka lafteeda, oo ay ku jiraan:
Adeegga qolka qalliinka iyo soo kabashada, iyo in ka badan
Daryeelka gebagebada nolosha iyo qaar ka mid ah adeegyada daryeelka caafimaadka guriga waxa sidoo kale daboola Medicare Part A.
Si aad u aragto wuxuu daboolo Medicare Part A, daawo fiidiyowga hoose.
Qoraalka Fiidiyowga - Waa maxay Medicare Part A
Dhisme buluug ah oo sawiran ayaa ka kor muuqda qayb gadaale oo jaalle ah oo ka hooseeysa qoraalka buluugga ah.
QORAALKA SHAASHADA: Muxuu Lagu DaboolaaMedicare Part A?
Dhismuhu wuxuu si tartiib ah ugu dhaqaaqay dhanka daawadaha iyadoo gaari xammuul ah oo buluug ah oo iskutallaab cad leh uu ka soo hor baxayo. Kamarada ayaa soo dhawaysay daaqada
Alaabta guriga ee buluugga ah iyo jaalaha ah, oo ay ku jiraan sariirta, kursiga, telefishanka saaran miiska, iyo roogga ayaa ka muuqda qayb gadaale oo jaalle khafiif ah oo ka hooseeysa qoraalka buluugga ah.
QORAALKA SHAASHADA: Part A Wuxuu Daboolaa Daryeelka Ku Jiritaanka Isbitaalka &Bukaan-jiifka, oo ay ku jiraan...
Alaabta guriga ayaa si tartiib ah ugu dhaqaaqeysa dhanka daawadayaasha kahor inta aynu ku soo dhoweyn telefishanka.
Qoraalka buluuga ah ayaa ka muuqda qayb gadaale oo cad oo uu hareyso soohdin buluug khafiif ah. Qoraalka si tartiib ah ayuu kor ugu soconayaa.
QORAALKA SHAASHADA: Qol Yar oo Gaar ah
QORAALKA SHAASHADA: Cuntooyinka Isbitaalka
QORAALKA SHAASHADA: Adeegyada Kalkaalinta ee Xirfadlaha
QORAALKA SHAASHADA: Daryeelka Lagu Bixiyo Waararka Gaarka ah
QORAALKA SHAASHADA: Daawooyinka, Sahayda Caafimaadka & Qalabka Caafimaadka ee La IsticmaalayInta Lagu Gudojiro Ku Jiritaankaaga Qaybta Bukaan-jiif
QORAALKA SHAASHADA: Baaritaanka Shaybaarka, Raajooyinka & Qalabka Caafimaadka Bukaan jiif Ahaan
QORAALKA SHAASHADA: Qolka Qalliinka &Adeegyada Baxnaaninta
QORAALKA SHAASHADA: Qaybo Ka Mid ah Dhiig Ku Shubidyada Ka Dhaca Gudaha Isbitaalka Ama Xarunta Kalkaalinta Xirfadlaha
QORAALKA SHAASHADA: Adeegyada Baxnaaninta (Tus. Daawaynta Jirka) La Helo Iyadoo Loo Marayo Daryeelka Caafimaadka ee Guriga
QORAALKA SHAASHADA: Daryeelka Caafimaadka Xirfadlaha ee Lagu Bixiyo Gurigaaga Haddi Aad Guriga U Socoto Oo Aad Kaliya U Baahan TahayDaryeelka Waqti-dhimanka ah
QORAALKA SHAASHADA: Daryeelka Gebagebada Nolosha
Sanduuqa cad ayaa hoos u dhaqaaqo wuxuuna muujiyaa qoraal buluug ah.
QORAALKA SHAASHADA: Medicare Made Clear waxaa sameeyay UnitedHealthcare
2. Medicare Part B: Caymiska Caafimaadka
Waa maxay Medicaid Part B oo muxuu daboolaa?
Medicare Part B wauxuu daboolaa adeegyada dhakhtarka iyo daryeelka kahortagga ah. Tani waxaa ka mid ah:
Adeegyada la bixiyo marka dhakhtarku kugu daaweeyo isbitaalka
Daryeelka degdega ah ama daawaynta qolka degdega ah
Baadhitaanada iyo booqashooyinka dhakhtarka ee caadiga ah
Daryeelka kahortagga ah iyo baaritaanka, sida tallaalada hargabka, baaritaanada indhaha iyo baaritaanada kansarka
Qoraalka Fiidiyowga - Waa maxay Medicare Part B
Dhisme buluug iyo jaalle ah oo ka kor muuqda qaybta gadaale ee ka hooseeysa qoraalka buluugga ah.
QORAALKA SHAASHADA: Maxaa Lagu Daboolaa Medicare Part B?
Baabuur jaalle ah ayaa istaagaya dhismaha hortiisa markuu dhismuhu u soo dhawaado daawadaha.
Kamarada ayaa soo dhawaysay mid ka mid ah shubaakada dhismaha.
Laba qof oo buluug iyo jaalle ah oo dhaqdhaqaaqaya ayaa ka soo muuqda qaybta gadaale ee cad ee ka horraysa shaashadda raajada. Qoraalka buluugga ah ayaa ka soo dul muuqanayo.
QORAALKA SHAASHADA: PART B
QORAALKA SHAASHADA: Part B Wuxuu Daboolaa Booqashooyinka Dhakhtarka & Daryeelka Bukaan-socodka, Oo Ay Ku Jiraan...
Kamarada ayaa soo dhawaysay shaashadda raajada. Qaybta gadaale cad waxaa ku wareegsan soohdin jaalle ah.
Qoraalka buluugga ah ayaa si tartiib ah u dhaqaajinaya kor qaybta gadaale cad.
QORAALKA SHAASHADA: Booqashooyinka Dhakhtarka
QORAALKA SHAASHADA: Xarumaha Qalliinka Bukaan-socodka
QORAALKA SHAASHADA: Adeegyada Caafimaadka Bukaan-socodka
QORAALKA SHAASHADA: Qaar ka mid ah Daryeelka Kahortagga ah (Tus. Tallaalada Hargabka)
QORAALKA SHAASHADA: Adeegyada Shaybaar ee Caafimaadka (Tus. Baaritaanada Dhiiga Ama Kaadida)
QORAALKA SHAASHADA: Raajooyinka, MRIs, raajada CT, EKGs & Qaar ka mid ah Baaritaanada Lagu Ogaado Cudurrada ee Kale
QORAALKA SHAASHADA: Qalabka Caafimaadka ee Waara ee Lagu Isticmaalo Guriga (Tus. Gure-guraha/socod-caawiyeyaasha)
QORAALKA SHAASHADA: Adeegyada Qolka Gargaarka Degdegga ah, Adeegyada Waqti-dhimanka/Googooska ah, Daryeelka Kalkaalinta ee Xirfadlaha & Adeegyada Caawinta Caafimaadka Loogu Talagalay Dadka Guriga U Socda
QORAALKA SHAASHADA: Daryeelka Caafimaadka Maskaxda Bukaan-socod Ahaan
Qaybta gadaale way taraarixi waxayna u dhaqaaqi hoos, meel ka baxsan shaashadda, iyadoo muujinaysa qoraal buluug ah oo ku yaala qaybta gadaale jaallaha ah.
QORAALKA SHAASHADA: Medicare Made Clear® Waxaa Sameeyay UnitedHealthcare
3. Medicare Part C: Qorshayaasha Medicare Advantage
Waa maxay Medicaid Part C oo muxuu daboolaa?
Medicare Part C wuxuu daboolaa Medicare A iyo B labadooduba (oo sidoo kale loo yaqaano “Original Medicare”). Medicare Part A iyo Medicare Part B ayaa inta badan la isugu geeyay hal qorshe, oo loo yaqaano Qorshaha Medicare Advantage.
Qorshayaasha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Caafimaadka (sidoo kale loo yaqaano D-SNPs ama qorshayaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah) waa nooc ka mid ah Qorshaha Medicare Advantage. Qorshooyinkaan waxaa loogu talagalay dadka haysta Medicaid iyo Medicare labaduba. Qorshayaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah waxay siiyaan caawimaad dheeraad ah dadka qaba baahiyaha daryeelka caafimaadka ee adag iyo dakhliga xaddidan. Qorsheyaal caafimaad oo badan oo laba geesood ah waxaa ku jira isu-duwidda daryeelka. Taasi waxay sahlaysaa in la maareeyo dhakhaatiir iyo takhasusleyaal dhowr ah. Qorsheyaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah ayaa inta badan bixiya macaashyo dheeraad ah sida caymiska aragga, ilkaha iyo maqalka. Taasi waxay kaa caawin kartaa caymiska daryeelka dad badan oo aan haysan ama laga yaabo inay awoodi waayeen inay iska bixiyaan.
Wax badan ka ogow macaashyada dheeraadka ah ee aad ka heli karto qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah.
4. Medicare Part D: caymiska daawada dhakhtarku qoro Context link
Waa maxay Medicaid Part D oo muxuu daboolaa?
Medicare Part D wuxuu daboolaa daawooyinka dhakhtarku qoro qaarkood, marka laga reebo kuwa ay horay u dabooleen Medicare Part A iyo B. Waa suurtogal in la helo caymiska daawada iyadoo loo marayo qorshaha Part D ee goonida ah. Balse si wax loo fududeeyo, inta badan qorshayaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah ee Medicare Advantage waxaa ka mid ah caymiska daawada. Haddii aad qaadato wax daawooyinka dhakhtarku qoro ah, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in daawooyinkaaga uu daboolo qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah kahor intaadan isdiiwaangelin.
Wax badan ka ogow caymiska daawada dhakhtarku qoro ee qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah.
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 03.22.2022 waqtiga 11:17 SUBAXNIMO CDT